“ စဉ်းစားထား၊ စဉ်းစားထား။ဆေးလိပ် ဖိုးကို မနည်းတော့ဘူး။ ကြက်သားဈေးကျလို့ ကြက် သားချက်ရ။ ၀က်သားဈေးကျလို့ ၀က်သားဝယ်ချက် ရ။ တော်မသိဘူး မဟုတ်လား။ ပြောမပြောချင်ဘူး” “ ဒီ ဘောဂဗေဒတွေ …..ကျုပ်လာပြောမနေနဲ့။ ဘာမှ အဆင်မပြေသေးတော့ ထိုင်နေတာမှာ စရိတ်ပွန်း သက် သာသေးတယ်မှတ် ပါ ရှင်မရယ် ”
ကျုပ်ရဲ့ဖိုတွန်သံလေး မဆုံးခင်မှာပဲ တံခါးခေါက်သံ တဒေါက်ဒေါက်မြည် လာပြန်တာ ကြောင့် အိမ်ရှေ့ချွတ် ထားတဲ့ဖိနပ် စုံကိုင်ပြီး အိမ် နောက်ဖေး သန့်စင်ခန်းထဲ ပြေးရတော့တာပါပဲ။ ဖိနပ်ကျန်ခဲ့ရင် သဲလွန်စရသွားနိုင်တယ်လေ။ လောလောဆယ်လေးမှာတော့ ဒီသန့်စင် ခန်းလေး ဟာ ကျုပ်အတွက် စပိန်ပြည်ကြီးပါ။ ဒါတောင် စိတ်မဖြောင့်ပါ ဘူးဗျာ။ ဒီလူတွေ ရိပ်မိသွားပြီး ‘အပေါ့အပါးလေး သွားပါရစေ’ ဆိုလာရင်အခက်။ ဒီတော့ ရှင်မပြောသလို ကျုပ်လူရှိရာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် လိုက်သွားရကောင်းမလား စဉ်းစားမိတယ်။ အားရာရား
Posted in အနုပညာ	Tags: အသောအထေ့	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
This entry was posted on August 3, 2009 at 2:05 am and is filed under အနုပညာ.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leavearesponse, or trackback from your own site.	Navigate
Previous: ဖြစ်တည်မှုကို မှန်းဆခြင်း	Next: သရဲသကြားလုံး	Blog at WordPress.com. %d bloggers like this: